टिभी अन्तरवार्तामा नै महिलाले भनिन म नेइमारसँग सहमतिमै यौनसम्पर्क गर्न चाहन्थेँ तर…. || सुनौलो नेपाल
टिभी अन्तरवार्तामा नै महिलाले भनिन म नेइमारसँग सहमतिमै यौनसम्पर्क गर्न चाहन्थेँ तर….
जेठ २४ काठमान्डौ ब्राजिलिएन स्टार फुटबलर नेइमार अहिले कठिन समयबाट गुज्रिरहेका छन्। एकातिर लगातारको चोटका कारण नेइमारले राम्रोसँग खेल्न पाएका छैनन् भने अर्कातिर एक महिलाले उनीमाथि बलात्कारको आरोप लगाएपछि नेइमार थप समस्यामा परेका हुन्।
नेइमारमाथि बलात्कारको आरोप लगाउँदै ब्राजिलकी एक महिलाले उजुरी दर्ता गरेकी छन्। गएको मे १५ मा आफूमाथि पेरिसको एक होटलको कोठामा नेइमारले गएको मे १५ मा आफूमाथि बलात्कार गरेको आरोप ती महिलाले लगाएकी हुन्। नाजिला ट्रिन्डाडी नाम गरेकी ती महिलाले एसबिटी ब्राजिल टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा नेइमारले आफूलाई यौन दुर्व्यवहार र बलात्कार गरेको दाबी गरेकी छन्।
अन्तर्वार्ताको क्रममा उनले आफू पिएसजी तथा ब्राजिलका खेलाडी नेइमारसँग आकर्षित भएको र उनीसँग यौन सम्बन्ध कायम गर्ने इच्छाले पेरिस पुगेको बताएकी छन्। नेइमारकै खर्चमा आफू पेरिस पुगेको र होटलमा बसेको उनले बताएकी छन्। उनले आफू सामान्य व्यक्ति रहेको र एक विद्यार्थी एक छोरी र एक आमा रहेको उल्लेख गरेकी छन्। उनले आफू दर्व्यवहार र बलात्कार दुवैमा परेको दाबी गर्दै भनेकि छन् आफूले भेट्दा नेइमार आक्रोशित र म्यासेजमा कुरा गर्दाको भन्दा पूर्ण भिन्न तरिकाले प्रस्तुत भए।
उनले सुरुमा आफू सहमतिमै यौन सम्पर्कका लागि तयार भएको भए पनि नेइमारले कण्डम प्रयोग गर्न अस्वीकार गरेको र आफूले प्रयोग गर्न जोड दिँदा उनी आक्रोशित भएको र आफूले अस्वीकार गर्दा गर्दै पनि उनले यौन सम्बन्ध कायम गरेको उनले दाबी गरेकी छिन।
यता नेइमारले भने सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। एक वक्तव्य जारी गरेर नेइमारले ह्वाट्सएप म्यासेज मार्फत पनि आफू निर्दोष रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले महिलाको टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका बारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।